မြန်မာဘလော့ကာတို့ ၏ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ: ပါလေရာ ဂွက်ထော် -ခေါ်- အောက် စ ဖုတ် ကျောင်းသူကြီး
ပါလေရာ ဂွက်ထော် -ခေါ်- အောက် စ ဖုတ် ကျောင်းသူကြီး
ဘလော့လောကတွင် မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နှင့် မြင်မြင်သမျှအထူးအဆန်းများဖြစ်နေသော ကျွန်ုပ်တို့ သည် တနေ့ သောအခါ ဘလော့လောကသားများ မှတ်တမ်းတင်ရေးသားလေ့ရှိသော ကျောက်သင်ပုံးကြီးများကို လေ့လာရန်အလို့ ငှာ ဘလော့လောကသားများ၏ နေအိမ်များဆီသို့ တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် သူခိုးချောင်းချောင်းကြ၏ ။ အိမ်တိုင်းရှိ ကျောက်သင်ပုံးတိုင်းတွင် မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ဟု လွန်စွာမှရှည်လျားသော အမည်နာမတခုကို တွေ့ ရဖန်များလာသောအခါ ဘလော့လောကတွင်လည်း တိရိစ္ဆာန်များ ရှိပါပေလားဟု တအံ့တသြ ရင်သပ်ရှုမော မိကြ၏ ။ နေရာတကာ စူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘလော့လောကတွင် ကျင်လည်ကျက်စားနေသော အနှီ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ဆိုသော တိရိစ္ဆာန်အား သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပေ၏ ။
မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ၏ အိမ်သို့ ဝင်ဝင်ခြင်းသကာလ မြင်တွေ့ လိုက်ရသော သူ့ အိမ်ရှေ့ တွင် ထောင်ထားသည့် ဘိလပ်လို ဆိုင်းဘုတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် ငပိသံနှင့် အသံထွက် ဖတ်လိုက်မိသည် ။
မီး နာမည် က မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ပါ ။ မီးကတော့ အောက် စ ဖုတ် (Oxford)မှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ် ။ မီး ဒယ်ဒယ်ကတော့ အမေကြီး ကား (America) ဆိုတဲ့ နိုင်ငံမှာ အီးကုန်းနောမစ် (economic) အရ အောင်မြင်နေတဲ့ ဘီးစုတ်နဲ့ သမား (business man)ပါ ။ မီး က တော့ အမေကြီး ကား ကို ရောက်တာ နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်နှစ်ကြီးများတောင် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်လို့စုတ်ပြတ် ဆင်းရဲ သိမ်ဖျင်းတဲ့အရေးအသားနဲ့ ဘိလပ်လိုပဲ မှုတ်တတ်ပါတော့တယ် ။
သြော် .. ကျွန်ုပ်တို့ မှားလေစွ မှားလေစွ ။ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံသည် ကျွန်ုပ်တို့ မဟာအမှားကြောင့် လူစင်စစ်မှ တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ သက်ဆင်းရ၏ ။ နောက်ထပ်အမှားများ မပြုလုပ်မိလေအောင် မော တယ် ဘာဘီကျူး (Moral Virtues) ဟု နာမည်တပ်ထားသော သူမ၏ နေအိမ်ထဲကို ခြေလှမ်းဝင်ခါ လေ့လာရေးစခန်း စတင်လိုက်သည် ။
အောက် စ ဖုတ် ဆိုသော ကျောင်းတော်ကြီးတွင် တက်ရောက်နေသော သူမ၏ ဘိလပ်အရေးအသားသည် အံ့မခန်းပေစွ ။ ကျွန်ုပ်တို့ တွင်ရှိသော ဒစ်ရှင်နရီ ၊ ဂရမ်မာ ၊ အက်ဆေး စသည့် စသည့် စာအုပ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာကို အဖန်တရာ ပြန်လှန် ဖွေရှာ သော်လည်း မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ရေးထားသော အရေးအသားမျိုး လုံးဝ လုံးဝ မပါရှိပေ ။ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ၏ ဘိလပ်အရေးအသားသည် တုနှိုင်းဖွယ်မရှိ ဟု ဆုံးဖြတ်ခါ ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် ပညာရေးနှင့် ထန်းသီးလောက်သာကြီးမားသော ကျွန်ုပ်တို့ ဦးနှောက်အတွက် အစဉ်မှတ်သား သင်ခန်းစာယူရန် အလို့ ငှာ အလွန်တရာ မြင့်မားလှသော အောက်ပါဥပမာများကို ချမရေးဘဲ မနေနိုင်အောင် ချရေးထားလိုက်ရပေတော့သည် ။
I am massive impressed to them and proud of what they does. Weldone, Guys who does this brilliant site.
ကျွန်ုပ်တို့ အတွေး ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဂရမ်မာသင်ပေးသော ဘုန်းဘုန်းက ပြောခဲ့ဖူး၏ - massive သည် နာမ၀ိသေသန (နာမ်ကိုအထူးပြုသောစကား) ၊ အလွန်ကြီးမားသောဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည် ။ ထိုသို့ ဆိုလျှင် မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံသည် ဘယ်နာမ်ကို အလွန်ကြီးမားသည်ဟု ပြောနေသနည်း ။ ရှေ့ မှာ အိုင်ဟု သုံးထားသောကြောင့် သူမ အလွန်ကြီးမားသည်ဟု ဆိုပေသလော ။ ထိုသို့ ဖြစ်ခဲ့လျှင် သူမ၏ ဘယ်နေရာ အစိတ်အပိုင်းက အလွန်ကြီးမားသနည်း ။ သူမ၏ ဦးနှောက်မှလွဲ၍ ကျန်တာဖြစ်နိုင်သည်ဟု နားလည်သလောက်လေး ဆွဲတွေး၍ ကောက်ချက်ချမိသည် ။
they does ဟု သုံးမိသော ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် ဘုန်းကြီးကျောင်းသားသည် ခြေဖ၀ါးကို ငှက်မွှေးနှင့်ပွတ်၍ ဒဏ်ပေးခံရဖူးသည် ။ ယားသောကြောင့် တချက်ရယ်ချင်တိုင်း they do ပါ ဘုရား they do ပါ ဘုရားဟု အော်ခဲ့ရဖူးသည် ။ ထိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးပေးတတ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စာသင်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အောက် စ ဖုတ် လို ကျောင်းတွင် စာသင်ကြားနေသော မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ သည် ကံကောင်းပေစွ ကံကောင်းပေစွ ။
နောက်ဆက်တွဲ ဥပမာများ ။
Weldone, Guys who does this brilliant site.
Thanks ever so much indeed for your kind visited.
You all are my lovely friends through to know you all from Blogging. 'Friendship mean everything to me.'
It has been overaweek that i didn't posts as i have exam came up.
Can you all believe we having heavy snow unlikely time in UK this year 2008???
To my awareness, It's very much unlikely snowing and bitterly cold conditions have swept across the country, causing chaos on the roads during Easter weekend.
အထက်ပါစာကြောင်းများကို ဖတ်ရင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရူးချင်ချင်ဖြစ်သွားသည် ။ ခွက်ပုန်းအရက် ၀စ်လစ်စကီ မလို မူးချင်ချင် ဖြစ်သွားသည် ။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အောက် စ ဖုတ် တွင် ကျောင်းမတက်ဖူးသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။ မှတ်သားလောက်ပေစွ မှတ်သားလောက်ပေစွ ။
သူမ ရေးထားသော ကွန်မန့် တခုတွင် "lack of pointless" ဆိုသော အသုံးအနှုံးကို မြင်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မေးစေ့များ မေးသီးများ ပါးစပ်ထဲသွင်းခါနီး ဇီးသီးများ ရှိရှိသမျှ အကုန်လုံး အောက်သို့ ပြုတ်ကျသွားသည် ။ ဘုရား ... ဘုရား အံ့မခန်း အောက် စ ဖုတ် ပါလား ။ အလွန်တရာ လေးစားခြင်းကြီးစွာနှင့် အောက် စ ဖုတ် ကျောင်းအကြောင်း လေ့လာစုံစမ်းရန် ချက်ချင်းပင် အောက် စ ဖုတ် တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျွန်ုပ်တို့ ၏ သူငယ်ချင်းကောင်းကြီးထံ ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်သည် ။
ကျွန်ုပ်တို့။
သေနာကောင် ငါတို့ ပါကွ ။ ထွက်သက် ၀င်သက် နဲ့ ကမ္ဘာတဘက်ခြမ်းက မင်းလို သေနာကောင်မျိုးတွေလေ ။
အော် အော် မင်းတို့ ကလည်း မသေနိုင်သေးပဲကိုး ။ ငါ့ ဆီ ထူးထူးခြားခြား ဘာ လှမ်းဆက်လဲ ။
ဒီလို ဒီလိုကွာ - ခုတလော မြန်မာ ဘလော့ကာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြား ရွှေပန်းစား (မှားသွားတယ် ရေပန်းစား) နေတဲ့ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ဆိုတဲ့ ဘလောကာ့ စော်တဗွေ အကြောင်း မေး မလို့ ကွ ။ သူ က လည်း မင်းတို့ ရဲ့အောက် စ ဖုတ် ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးကပဲ တဲ့ ။
ဘုရား ဘုရား ...
ဟေ့ ကောင် - ခါတိုင်း စော်တွေအကြောင်းပြောရရင် သရေတွေ သုတ်မကုန်တဲ့ ကောင်က ။ ခု ဒီစော် နာမည် ပြောတာ ဘာလို့ဘုရား တ နေ တာလဲ ။
တရမယ်လေကွာ တရမယ် ။ မင်းတို့ ပြောလိုက်တဲ့ အဲဒီ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ကြောင့်ပေါ့ - ငါ တို့ ကျောင်းတော်ကြီးက ပရောဖက်ဆာတွေ အကုန် သူ့ အတန်းမှာ တင်တဲ့ စာတွေ အမှတ်ခြစ်ရင်း ရူးသွားကြလို့စိတ္တဇဆေးရုံ ရောက်နေကြပြီ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ ။ ခု ငါ တို့ကျောင်းမှာ ပရောဖက်ဆာ တွေ ပရောဟိတ်တွေ အကုန်လုံး သူ့ စာတွေဖတ်ပြီး အဲလိုဖြစ်ကုန်လို့ပရောဖက်ဆာတွေ စမ်းသပ်မွေးမြူထားတဲ့ ချင်ပန်ဇီ မျောက်လေးတွေကပဲ သင်နေတော့တယ်ဟေ့ ။ အဲဒီမျောက်တွေကျတော့မှ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံရဲ့စာတွေကို ဖတ်နိုင်တော့တယ် ။ မြွေမြွေချင်း ခြေမြင် ဆိုသလိုပေါ့ကွာ ။ ငါလည်း ခု ကျောင်းထွက်ထားတယ် ။ cambridge ကို ပြောင်းတော့မယ် ။ အဲဒီမှာတော့ မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံလို ဟာမျိုး မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း အသေအချာ စုံစမ်းထားပြီးပြီ ။
Posted by Burmese1001 at 6:40 AM
ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ ရယ်နေရပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ အပြစ်တွေကို ထောက်ပြတဲ့အခါ ကာယကံရှင်တွေ အတွက် ရယ်စရာကောင်းပြီး ပြုပြင်သွားအောင်ရေးရင် ပိုကောင်းမလားမသိ..။ အန်တီ့စိတ်ထဲ တချို့နေရာတွေ နည်းနည်းကြမ်းသလား လို့ပါ။ အရေးခံရတဲ့သူတွေ ၀မ်း နည်းမှာ စိုးလို့ပါ..။ ဆရာလုပ်တယ် မထင်စေချင်ပါ..။ အရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့လေးမို့လို့ စေတနာနဲ့ အကြံပြုတာပါ..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
အန်တီမေငြိမ်းလို နာမည်ရှိ စာရေးဆရာမတယောက်က ခုလို သေချာဖတ်ပြီး ထောက်ပြတာအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ လည်း ဘယ်သူ့ ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုစိတ် မရှိတာ အမှန်ပါ ။ စကားလုံးအသုံးကြမ်းတာကတော့ ယောက်ျားလေးတို့ သဘာဝ ပျော်စေပျက်စေသဘောလောက်ပါ ။
ဤပိုစ့် ၂ ခုလုံးသည် ကျွန်တော်သိသော လူနှစ်ဦးလုံးနှင့် ပက်သက်နေပါသည်။ သူတို့ ၂ဦးလုံးကို ချိန်ရေးထားမှန်းလဲ သိပါသည်။ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာတော့ စာရေးသူတွေ ကိုယ်တိုင်သိမှာပါ။ ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုတွေ ဖတ်ရတော့ စိတ်သိပ်မကောင်းပါဘူး။
စာအရေးအသားကိုလည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အတွေးအခေါ်လည်း ကောင်းတယ်။ သူများတကာကို ရွဲ့သလိုလိုနဲ့ ရေးတာဆိုတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ အန်တီ မေငြိမ်းပြောသလိုပဲ ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါ။ အကြံပေးရုံသက်သက်ပါ။
you guys used real names.
ကျွန်ုပ်တို့ပြောသော ပုံပြင်များမှ မင်းသား မင်းသမီးများ
Soe Mya Nandar Thet Lwin (မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ -ခေါ်- ပါလေရာ ဂွက်ထော်)
Yan Aung (အီးအိုတီ မင်းသားကြီး)
I think it is not good. It can make them to be sad, and for their friends as well.
သရော်စာကို သရော်စာ အဖြစ် သေသေချာချာ ရေးနိူင်လျှင် ကြိုက်၏။ လက်သင့်ခံ၏။ ဖဲ့စာဆိုလျှင်တော့ မဖတ်ပါ။ အားမပေးပါခင်ဗျား။ အခုဆောင်းပါးများက ဆဲစာ ဖြစ်နေ၏။
အောက်တန်းကျသော စကားများ၊ လက်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းများကို မသိဘဲ သူတပါးအား တတ်ယောင်ကား ဝေဖန် ရေးသား သည်က အထင်သေးစရာ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိဘလော့ဂ်မှာ မိမိကြိုက်တာ ရေးခြင်းသည် အပြစ်မရှိပါ။ သူတစ်ပါး၏ အမှားကို ထောက်ပြခြင်းသည်လည်း မှားသည်ဟု မဆိုသာပါ။
`ညီမငှေး စာလုံးပေါင်းတာ လွဲနေတယ်။ ဒီလိုလေးဆိုရင် ပိုပြီး သင့်တော်မလား...´ လို့ပြောခြင်း
`မိုးကျ ပြန်မလာ ၀က်ဝံ ဆိုသော တိရစ္ဆာန်မခင်ဗျာ... စုတ်ပြတ် ဆင်းရဲ သိမ်ဖျင်းတဲ့ ညီမရဲ့ အောက်စဖုတ် ကျောင်းထွက် ဘိလပ်အရေးအသားဟာ တုနှိုင်းဖွယ် မရှိလောက်အောင် အံ့မခန်း ၀က်ဝက်ကွဲ မှားယွင်းနုံချာနေပါတယ်...´ လို့ပြောခြင်း
ဘယ်ဟာက ပိုပြီး အမှားကို ထောက်ပြတာလဲဆိုတာ စာတွေရေးနေတဲ့သူဆိုတော့ ပြောစရာမလိုလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင် လူတိုင်းအမှားရှိမှာပါ။
မောင်တို့ဆိုလေ ပျားသကာသို့ ချိုလှစေ´ ဆိုတာကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ရှေးကလူတွေ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပြောခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
မိမိဘလော့ဂ်မှာ မိမိကြိုက်တာ ရေးခြင်းသည် အပြစ်မရှိပါ။ သူတစ်ပါး၏ အမှားကို ထောက်ပြခြင်းသည်လည်း မှားသည်ဟု မဆိုသာပါ။ သူတစ်ပါး၏ အမှားကို ဟာသလုပ်ရေးခြင်းသည်လည်း မသင့်လျော်ဟု မပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်... လူတစ်ဘက်သားကို (အထူးသဖြင့် မိန်းမသားတစ်ဦးကို) လွန်ကျူး၊ နှိမ့်ချ ပုတ်ခတ်ခြင်းကတော့ သင့်မသင့်ဆိုတာ...။
(ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့ဂါတွေ အားလုံးကို စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်... သင့်မတင့်ဆိုတာ...)
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်လောကဟာ မိသားစုတွေ စုနေတဲ့ အိမ်ကြီး တစ်လုံးလိုပါပဲ။ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဖြစ်နေရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
`အီးကုန်းနောမစ် (economic) အရ အောင်မြင်နေတဲ့ ...´
Economics က "s" ပါမှ စီးပွားရေး ဘာသာလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ "s" မပါရင် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး သက်ရောက်သွားပါတယ်။ `မစိုးမြနန္ဒာသက်လွင်´ မှားရေးတာလား၊ ဒီဆိုက်ဒ်က မှားရေးတာလားခင်ဗျာ။
ဒီဘလော့လေးကို အခုမှ စသိတာပါ...
ဝေဖန်ပြီး အမှားတွေကို ထောက်ပြတဲ့ ဘလော့တစ်ခု လို့သိရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်...။
အခုလို ပွင့်လင်းစွာဝေဖန်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပြီး...ကြိုဆိုပါတယ်..။ ကျနော့်စိတ်က ကျနော့ကိုပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်တဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာလက်ခံတတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်..။အဲဒီအတွက်ဒီဘလော့လေးပေါ်လာတာကို ကြိုက်ပါတယ်..။ ဖတ်လို့လည်းကောင်းပါတယ်..။ ဝေဖန်တယ် အမှားထောက်ပြဆိုကတည်းက စေတနာတွေပါမှန်း သိပီးသားပါ..။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ လူဆိုတာ ကိုယ့်မျက်ချေးကို ကိုယ်မမြင်သူများကိုပဲ မြင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေဆိုတော့ ကိုယ့်အမှားကို ထောက်ပြဝေဖန်တာကို ကျေနပ်စွာလက်ခံပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောပါရစေ...
ညစ်ညမ်းတဲ့ ဝေဖန်မှုမျိုး ..ထိခိုက်စေလိုတဲ့ စကားလုံးမျိုး....မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် အရှက်ရစေတဲ့ စကားလုံးကြမ်းများကို မသုံးသင့်ဘူးလို့တော့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်..။
ဟာသဥာဏ်ကွန့်ပီးရေးသားရင်လည်း ပျော်စရာကိုဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်လို့ မြင်ပါတယ်...။
အန်တီမေငြိမ်းပြောသလို အရေးကောင်းတဲ့ဘလော့လေးမို့ စေတနာနဲ့ထောက်ပြအကြံပြုတာပါ...။
ကျွန်တော်တွေးမိသလောက် ကြိုဆိုအားပေးသင့်တဲ့ အရေးအသားများ မဟုတ်ဟု မြင်ပါသည်.. နိုင်ငံရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောသည်ဆိုပါက မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်၊ ကရုဏာဒေါသောကြောင့်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် ပက်သက်သောကြောင့် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဟု ပြောရန်ခက်သွားပါသည်.. အမှားရှိတိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမဖက် ပြောကြကြေးဆိုလျှင်လည်း ဘဘော့ဂါအားလုံးအား အစဉ်လိုက် ပြောရန်သာ ရှိတော့သည်.. ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရလျှင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သောမှတ်ချက်များသည် အနိမ့်ဆုံးစီဘောက်စ်ထဲနှင့် အမြင့်ဆုံးကွန် မန့် နေရာများတွင်သာ ရှိသင့်ပါသည်.. ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ကြစေချင်ပါသည်..
Massive Impressed ဆိုတာ Double Adjective ပါ.
များသောအားဖြင့်တော့ Massively Impressed လို့ သုံးကြပါတယ်။ Asia မှာ ကတော့ Adj ကို တစ်ခုတည်း သုံးကြပါတယ်. Europe နဲ့ US မှာတော့ Double Adjective က ရိုးနေပါပြီ။ ဘုန်းကြီကျောင်းသားနားလည်အောင် ဥပမာပေးရရင် Large Yellow Umbrella. ဒီမှာ yellow ကို Adj အဖြစ်သုံးထားပြီး Double Adjective ကို လဲတွေ့ ပြီဟုတ်?
SMNTL ကိစ္စမှာ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြချင်တာ သူ့ ဘိုလိုအရေးအသားများအား နှိမ်ခြင်းဆိုသည်ထက် Oxford တွင်ကျောင်းတက်နေသူတဦးနှင့် ကိုက်ညီသည့် အင်္ဂလိပ်စာမျိုး ရေးသင့်ကြောင်းကို ထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည် ။
တဖန် သူ ရေးသော အင်္ဂလိပ်ကဗျာများသည် အလွန်ကောင်းမွန်နေခါ သူ့ တခြားပို့ စ်များတွင် ရေးထားသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုံးနှင့် ကွဲပြားနေခြင်းကို အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းသူတိုင်း ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် သူ့ ဘလော့ကို ထောက်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တခြား သူ နှင့်ပတ်သက်သော ဟန်ဆောင်မှုအများအပြားကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ ရှိခဲ့သော်ငြား အလုံးစုံမရေးချခဲ့ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တန်ဖိုးရှိသောအချိန်များကို သူ တယောက်တည်းအတွက် ဖဲ့မပေးချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူ့ အကြောင်းရေးထားသော ကျွန်ုပ်တို့ ပို့ စ်ကို သူ့ ဘာသာ ဘလော့ကာလောက၏ ကျောက်သင်ပုန်းများတွင်ကြေငြာဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ သည် သူ့ အား တိုက်ခိုက်လိုခဲ့သော် အနှီ ကျောက်သင်ပုန်းများတွင် ကြေငြာဝင်သူမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပင် မဖြစ်သင့်ပါတကား။ စာဖတ်သူတို့ကိုယ့်ဘာသာစဉ်းစားကြကုန်လော။ ဤတွင် SMNTL နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုခြင်း ပြီးဆုံးသည်။
Ooh Fuck off. bullocks, shut it, zip it and fuck it.
Go and fuck your mother or sister or aunt with your cock if you have lots of free time.
You mother fucker, you fuck!! Fuck yourself, suck yourself and fuck you.
To Pay Phoo
"massive impressed" is completely wrong. It has nothing to do with differences in usage between Asia,US or wherever. Here is one suggestion. If you have some doubt concerning grammatical accuracy, google that phrases or sentences.
ပေဖူးလွှာ is completely wrong. Whatacrap!
Blogger ပေဖူးလွှာ said...
By all mean, go ahead bro. This blog really make me laugh. LOL!!!
ပါလေရာ ဂွက်ထော်နှင့် သူမ၏ ပုံတို ပတ်စများ
မရှိမဖြစ် အီးအိုတီမင်းသားကြီး ရန်အောင်